Haween lagu xasuuqay degmada Tayeeglow ee gobolka Bakool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Haween lagu xasuuqay degmada Tayeeglow ee gobolka Bakool
A warsame 10 December 2014 10 December 2014
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool ayaa sheegaya in ilaa 7 haween ah siyaabo kala duwan xalay ilaa maanta loogu dilay banaanka iyo gudaha degmada.
Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow, Maxamed Cadale Xasan ayaa sheegay in labo ka mid ah haweenka oo ka tirsanaa ciidamada booliska ay banaan degmada ku gowraceen Al-Shabaab.
“Falkan xalay saqdii dhexe ayuu dhacay labo haween ka tirsan ciidamada booliska ayaa waxaa meel koonaha magaalada ka watay Al-Shabaab, waana gowraceen” ayuu yiri Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow oo wareysi siiyay Idaacada BBC-da.
Sidoo kale Gudoomiyuhu ayaa sheegay in 5 kale oo haween ah uu rasaas ku furay nin askari ahaa oo qabay mid ka mid ah 2-dii haween ee la gowracay, waxaana uu xusay inay baaritaano wadaan.
“5 haween kale waxaa baas ku furay mid ka mid ah askarta oo qabay mid ka mid ah labadii gabdhood ee la gowracay, baaritaan ayaana wadnaa”ayuu yiri Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow.
Askariga ayaa la sheegay inuu 5-ta haweenka ah u dilay qaab aargoos ah, waxaana askarigaas xiray ciidamada dowladda Soomaaliya.
Falalkaan ayaa noqday kuwa ay aad ula yaabeen dadkadegmada Tayeeglow oo ay maamulaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan oo xalay la shiray xildhibaano gaar ah
Ehelada ninkii dalka Mareykanka ku dilay wiil Soomali ah oo sheegay inuu waalnaa!